Maxaan Ka Baran Karnaa Kanye, Taylor iyo Beyonce | Martech Zone
Arbacada, Oktoobar 7, 2009 Axad, Janaayo 15, 2017 Douglas Karr
Maanta waxaan la hadlay koox CIO ah munaasabad Technet ah. Markii aan u diyaar garoobayay khudbadda isla markaana aan jaangoynayay soo bandhigitaankeyga kooxda, runtii waxaan doonayay inaan ku garaaco farriinta guriga in maalmaha xakamaynta ay naga dambeeyaan. Shaqadeena hadda ah teknoolojiyadda iyo suuqleyntu waa inaan awood u siino tikniyoolajiyadda ugana faa'iideysano inay saameyn ku yeelato dadka kale Mar dambe ma xakameyn karno wadahadalka.
The sawir laga soo bilaabo Jason Decrow oo ka tirsan wakaaladda wararka ee Associated Press. Kanye West wuxuu ku nool yahay adduun uu xor u yahay inuu si cad ugu sheego ra'yigiisa. Iyadoo aan loo eegin waqtigiisa qallafsan iyo xanuunka laga yaabo inuu ku riday Taylor Swift… Kanye wuxuu sameynayaa waxa aan dhammaanteen nahay free in la sameeyo maalmahan. Tani waxay cashar u tahay dhammaanteen. Waxaan ku noolnahay adduun qofkeen kasta oo naga mid ah uu masraxa ku boodi karo oo maskaxdiisa ku hadli karo. Dhamaanteen waxaan leenahay makarafoon (qaarkeen baa ka dad badan kuwa kale).
Ha ahaato mid togan ama mid taban, tani waa waxa ay shirkadaha aad uga baqaan baraha bulshada… luminta xakamaynta. Waxyaabaha layaabka leh ayaa ah in, halkii ay ka baqi lahaayeen, ay ka faa'iideysan karaan. Jawaabta Beyoncé ee ku aadan Kanye ayaa noqotay inay siiso Taylor Swift mikrafoonka inta lagu guda jiro aqbalaada Beyoncé isla markaana ay u ogolaato inay dhameyso hadalka aqbalida Beyoncé oo u ogolaatay Taylor inay isticmaasho waqtigeeda waxay ahayd mid aad u qurux badan oo naxariis leh shaki kuma jiro Beyonce in lagu xasuusan doono naf-hurideeda. In kasta oo ay u badan tahay inaysan ahayn qorshe xiriir dadweyne oo horay loo sii qorsheeyay, haddana waxay ahayd mid dhalaalaya.
Ganacsigaagu wuxuu ku socon doonaa Kanye goor dhow ama goor dambe. Waad qarin kartaa, ma jawaabi kartid, ama ma sameyn kartaa wax cajiib ah… ka faa'iideyso fursadda aad ku qabato wax kaa dhigaya inaad ka soocnaato. Runtii ma xasuusto wixii Kanye yiri, oo aan ka ahayn "Imma ha kuu dhammeeyo". Ma xasuusto khudbadii aqbalaada Taylor. Xitaa ma xasuusto fiidiyowga Taylor. Dareenka joogtada ah ee qaybta oo dhan, feker ahaanteyda, wuxuu ahaa jawaabta Beyonce.
Halkii lagu curyaamin lahaa cabsi, shirkadaha waa inay eegaan sida ay u awoodsiin karaan uguna saameyn karaan dadka kale warbaahinta bulshada. Haddana mar kale, laga yaabee inay dharka uun ahayd. Shaacin buuxda: Waxaan u maleynayay in fiidiyoowga Beyonce ay ahayd inuu helo abaalmarinta, sidoo kale.
Tags: beyoncekanyeKanye galbeedtaylorTaylor dhakhso ah
Helitaanka Wakaaladda Suuq geynta iyo Xayeysiinta
Oktoobar 8, 2009 at 2:11 AM
Adiga ayaa u daa adiga inaad jiido dhacdo noocan oo kale ah oo dhaqameed caan ah oo aad ku dabaqdo warbaahinta bulshada iyo suuqgeynta dhaqaalahan cusub ee macluumaadka. Sii wad!
Oktoobar 8, 2009 at 9:14 PM
Haa, waa dhowr toddobaad daahay… laakiin waxaan doonayay inaan sameeyo qoraalkan tan iyo markii ay dhacday. Mahadsanid Bean!
Oktoobar 8, 2009 at 12:18 PM
Waad ku mahadsantahay wadaagida Doug-kan. Waxaan maqlay wax walba oo ku saabsan Kanye fiasco, laakiin ma aanan maqal wixii ay Beyonce sameysay.
Oktoobar 8, 2009 at 9:15 PM
Xiiso leh sida qof walba diirada u saaray diidmada, maahan? Waxaan u maleynayaa markii aan daawaday warka inuu ahaa kaliya 1 ilaa 3 sheeko oo daboolay dhanka wanaagsan ee sheekada!
Oktoobar 10, 2009 at 4:22 PM
Doug, indho indheyn fiican. In kasta oo aadan xakameyn karin wadahadalka mar dambe, suuqleyda ganacsiga ayaa wali saameyn ku yeelan kara. Waxay qaadataa heshiis wanaagsan oo wacyigalin ah iyo xeelad si loo helo wada hadalada ka socda agagaarkaaga isla markaana aad naftaada u soo bandhigto qaab u gudbinaya kalsoonida iyo xiisaha dooda, laakiin waxay bixisaa waqti badan. Raadi Kanyes oo ka qaybgal iyaga!